Ahoana ny fomba hahatonga ny Play Store hiasa amin'ny Afo aorian'ny fanavaozana | Ireo mpamaky rehetra
Ahoana ny fomba hahatonga ny Play Store hiasa amin'ny Afo aorian'ny fanavaozana
Joaquin Garcia | | Nohavaozina tamin'ny 16/05/2018 15:22 | Amazon Kindle, Software
Araka ny fantatry ny maro aminareo, ny takelaka Amazon dia nohavaozina tamin'ny kinova vaovao izay misy ny mpanampy ny feo Alexa. Fiovana lehibe ho an'ny mpampiasa azy io nefa vao mainka aza ho an'ireo izay nametraka ny Play Store amin'ity fitaovana ity.
Ny fanavaozana vaovao amin'ny fitaovana dia nahatonga ny fampiharana sasany hijanona tsy miasa intsony araka ny tokony ho izy, indrindra ireo napetraka tanana. Manokana, nijanona tsy niasa ny Google Play Store. Serivisy tena ilaina ho an'ny mpampiasa sasany.
Mpampiasa maro no nitaraina momba ny toe-javatra. Amin'ny Nahita vahaolana ny XDA Forums. Tsy vahaolana tena ofisialy fa vahaolana mandeha ary farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny fanavaozana manaraka dia hiasa tsy misy olana.
Ny fampidirana Alexa dia manome olana amin'ny takelaka Play Store of Fire
Ny vahaolana dia ahitana ny fametrahana ny kinova farany amin'ny fampiharana roa izay ananan'i Google ao amin'ny fonosana GAPPS, antsoina hoe apps ireo Google Account Manager sy Google Services Framework. Ireo fampiharana ireo, rehefa havaozina, dia mampandeha ny Play Store indray.
Para mametraka Google Play amin'ny Kindle Fire, aloha tsy maintsy ampidinintsika ireo fonosana eto y eto. Raha vantany vao manana ny rakitra apk isika dia ampitaintsika amin'ny fitaovana. Alohan'ny hametrahana dia mankany amin'ny Settings izahay ary mankany amin'ny menio Security izay ahafahantsika mametraka rakitra eo ivelan'ny Amazon Appstore. Rehefa avy nampavitrika azy, mametraka ny apks izay alaina izahay ary aorian'ny fametrahana dia atsanganay indray ny rafitra.
Raha vantany vao naverinay indray ilay rafitra, dia hiasa indray ny Play Store ary ny Afonay afaka misintona izay rindranasa rehetra avy amin'ny magazay izahay ary koa atiny hafa. Zavatra izay tian'ny mpampiasa betsaka noho ny Amazon Appstore. Na ahoana na ahoana, raha azonao atao Manoro hevitra anao aho hampidina ny GAPPS rehetra avy amin'i Google ary manavao ireo rindranasa ao anaty Afo, amin'izay dia hisoroka olana lehibe izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » Ahoana ny fomba hahatonga ny Play Store hiasa amin'ny Afo aorian'ny fanavaozana
josie dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana, nanaraka ny dingana aho ary mandeha izany
Valiny tamin'i Jossie
Griselle Rojas dia hoy izy:
Nametraka google play amin'ny afo7 aho fa tsy mamela ahy hiditra
Valiny tamin'i Griselle Rojas
M. dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara Joaquín!
Nanana olana vitsivitsy aho nandritra ny fizotrany, napetraka ny taona fa tsy namela ahy hanokatra azy ireo. Farany dia nilavo lefona aho, satria taorian'ny namerenako sy namerenako ny fizotrany dia tsy lasa aho. Tsy haiko ny fomba, fa izao aho dia nandray ny tany mafy ary nohavaozina ny rindranasa ary manana ny fivarotana playa miasa indray aho.
Azoko ampiasaina indray ny takelaka misy ahy! Satria hatramin'ny nijanonany niasa tamin'ny fanavaozana farany dia nilaozana izy.
Valiny tamin'i M.
Diaz Alemanina dia hoy izy:
Salama, nanao araka ny nolazainao aho saingy mitoetra ao anaty famerenana mijery ny fampahalalana napetrako ny mailaka nofantsihiko tamin'izy ireo ary manontany ahy mailaka sy teny miafina foana izy ary mahazo foana ny fampandrenesana fa tsy hovonoina izany mandra-panavaozana azy. .. azafady mba ampio ... misaotra
Valiny tamin'i Germán Díaz
Oprah Winfrey aleony ny Kindle Oasis, sa tsy izany?